Kubekho inkqubela ke ithetha malunga boys: Njani ukufumana acquainted
Izolo bam -yeminyaka ubudala umfundi wabhala ngam umyalezo ku Facebook: Ekubeni kwi-disco ndabona kubekho inkqubela.
Ndifuna ukufumana acquainted, kodwa ndinga ukuya ubude bexesha ngokwenza oko. Undixelele njani mna kufuneka umthetho ukuphumelela intliziyo yakhe. Kodwa yintoni incopho bonke ukuba amaqhekeza aye ka-ingcebiso. Ukuba boy lacks boldness ukuthetha ukuze kubekho inkqubela, uya kuba besoyika ukuba touch kwaye asazanga yakhe kamva.
Uninzi girls andinaku kuma irresolute boys
Kukho anamashumi iindlela ukufumana acquainted nge kubekho inkqubela uyafuna. Uyakwazi mabalungiselele ithuba intlanganiso kwi-corridor, apologizing kwaye ecela ukuba yonke into yonke kunjalo uyakwazi ukufumana kwayo igama nedilesi, ngoko ke thumela yakhe ncwadi iintyatyambo engundoqo iqhosha impumelelo yeyona ndinovelwano ka-ukukholosa.
Musa t kuba besoyika ukuba kubekelwa ecaleni
Layo s nto kwi-uthelekiso kunye kunokwenzeka budlelwane nibe qala. Kulo nyaka uphelileyo mna faced efanayo iimboniselo. Ndandisoyika ukuba bathethe the guy mna liked. Kuba iinyanga ndiniyekele, kwaye abantu intlungu yi-emamele yam nasiphelo fancies kwaye xa ekugqibeleni, weza kum ukufumana acquainted (mna? khumbula umhla januwari), mna ke disappointed: waye akukho bani kodwa i-fool. Mna ngokulula ezilahlekileyo ixesha kwaye amandla.
← Ingaba Isitshayina girls 'lula'. Nezinye iingcinga kwi emnqamlezweni-yenkcubeko dating - Sup-China
Kuhlangana kuthi ngomhla Alaphukanga Bridge kwiminyaka: Isitshayina kubekho inkqubela yamkelwa libhunga Americans reunites kunye neziphene abazali, China News - e-Asia Omnye →